Shan maalmood oo sugitaan ah iyo 75 euro oo dib loo soo celiyo iPhone X | Wararka IPhone
Shan maalmood oo sugitaan ah iyo 75 euro oo dib loogu soo celiyo iPhone X
Cinwaanka waxaa laga yaabaa inuu macno yar sameeyo haddii aadan wax ka ogeyn kiiska aniga igu dhacay ee iPhone X oo leh batar barar, marka waxa ugu fiican ee lagu sameeyo kiisaskan aqri qeybta koowaad ee sheekadan ku saabsan batterigeyga iPhone oo bararsan, taas oo kiiskeyga ku eg dhamaadka farxad. Waana maalmo yar ka dib markii aan ka qaaday iPhone kiiska waxaan ogaaday in qalabku la socdo shaashadda oo aan lumin feker labaad oo ku saabsan wax kale waxaan aaday Apple Store ugu dhow, xaaladdan oo ah dukaanka Apple ee CC La Maquinista.
1 Shan maalmood oo sugitaan ah iyo 75 euro oo loogu talagalay iPhone-ka dib loo hagaajiyay
2 Qiimee burburka oo xal u hel
Shan maalmood oo sugitaan ah iyo 75 euro oo loogu talagalay iPhone-ka dib loo hagaajiyay
Cinwaanka maqaalkani waa sida saxda ah ee igu dhacday kiiskii iPhone X iyo batarigii bararsanaa. Waana ka dib baaritaanka ugu horreeya ee Genius dukaanka ka dib iyo ka dib bixinta kaarka Visa (si loo haysto lacagta loona kordhiyo tirada haddii loo baahdo) ee 75 euro, aaladda cusubi durba gacantayda ayey ku jirtaa. Xaalad waliba way ka duwan tahay oo sinaba uma dhihi karo tani waa inay la mid noqotaa dhamaanteen kuwa dhibaatadan qaba, laakiin talaabooyinku sida caadiga ah way la mid yihiin qof walba marka Apple ay si fiican wax u qabato waa muhiim in lala wadaago, sidoo kale sida markay wax khaldo ...
Xaaladdaydu waxay la mid ahayd ta dad kale oo badan waana taas oo haysashada iPhone X iyada oo aan la helin dammaanad rasmi ah (oo la iibsaday Noofembar 2017) waxay noqon kartaa kharash aad u sarreeya iyada oo ku xidhan dayactirka, laakiin kiiskeyga - Waxaan ku celinayaa xayeysiintan kiis kastaa wuu ka duwan yahay- Waxaa lagu xaliyay raridda dayactirka iPhone X 5 maalmood kadib markii loo geeyay dukaanka rasmiga ah ee Apple.
Kuwa aan dukaan ku lahayn meel u dhow, waxay u isticmaali karaan qeybiyeyaasha rasmiga ah adeeg farsamo tanna tan kaliya waa inaad maraysaa nidaamka si aad ugu magacawdo dhibaatada websaydhka shirkadda oo gali lambarka boostada ee magaaladaada oo arag kuwa kuugu dhow. Haddii ay dhacdo in qalabka lagu diro warqad-wade, qiimaha qiyaastii 12 euro ayaa lagu dabaqayaa., laakiin waxaan iska ilaalineynaa inaan geynay terminaalka dukaanka.
Qiimee burburka oo xal u hel
Xaaladdayda, ka dib markii aan u geeyay dukaanka dhibaatada batroolka oo barartay, Genius wuxuu ii sheegay in bixinta fiisaha dayactirka ee ku jira iPhone-kan uu yahay 75 euro beddelka batteriga, boosteejada ayaa laga diri doonaa dukaanka si loo qiimeeyo dhaawaca iyo ka dib Waa layla socodsiin doonaa haddii ay jiraan qaybo intaa ka sii waxyeelo badan si aan u aqbalo dayactirkooda iyo in kale iyada oo kharashka ka soo baxa kharashka aan ku bixinayo.
Nasiib wanaag aniga (taleefanku wuxuu ahaa mid nadiif ah bilaa dhibic, weligiis biyo kuma qoyan, iwm) dayactirku wuxuu ahaa batteriga laakiin Apple oo leh siyaasad aad u badan oo Apple ah ayaa go'aansaday inay ii soo dirto moodel aniga oo kale ah laakiin dib loo soo celiyay. Kiiskeyga, xogta fariinta darteed, iPhone X wuxuu ka tagay Prague, Czech Republic hal maalinna gurigiisii ​​ayuu yimid. Taasi waa marka aad qalabka u qaadatid Apple Store oo ay tahay inay u diraan dayactir, soo celinta soo celinta ama dayactir la'aan waxaa lagu sameeyaa cinwaanka macaamiisha oo waxaan fahansanahay in tani aysan aheyn qiyaas looga hortagayo COVID-19, waa cabir guud.
Sanduuqa dib loo soo celiyey ee iPhone X waa caddaan, waxay ku darayaan emaylka macluumaadka cusub ee IMEI, nambarka taxanaha ah iyo xogta kale ee aaladda cusub oo naga caawin doonta inaan aqoonsanno haddii ay dhacdo in la fashiliyo iyo kuwa kale. Waxaan dhihi karaa in wax walba ay ka dheereeyeen sidii la filayay iyadoo la tixgelinayo dhibaatooyinka caafimaad ee maanta na haysta. Waxaan qiyaasayaa in kani yahay nidaamka ay ku raacayaan dhamaan aaladaha leh batariga bararsan ama uguyaraan tani waa inay noqotaa dhammaantood.
Dayactirka iPhone X wuxuu la yimid iOS 13.4.1 iyo ka dib cusbooneysiinta, gelinta keydka oo si fiican u shaqeynaya.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Terminalka IPhone » iPhone X » Shan maalmood oo sugitaan ah iyo 75 euro oo dib loogu soo celiyo iPhone X
Galab wanaagsan: Waxaan kujiraa isla bogga adiga, sida saxda ah isla waxii igu dhacay aniga iyo, kaliya maanta, waxaan ka helay email emayl ah oo igu ogeysiinaya bedelka iyo inay horeyba ugu jirtay Apple Store inay soo qaado.
Si aan mobilka uga dhammaado, waxaan iibsaday 11-ka, in kastoo dadku kugula talinayaan inaan u soo celiyo si aan u ilaaliyo X-da oo aan u sugo 12-ka, waxaan u maleynayaa inaanan sameyn doonin tan iyo, mar kasta, waxaan ka walwalsanahay in aanan helin noocii ugu dambeeyay maxaa yeelay waxaan la falgalaa wax badan oo ka mid ah Apple Watch marka loo eego iPhone-ka.
Dhanka kale, anigu ma aanan bixin wax horay u bixiya, miyaad?
Nabade Pablo, waan ku faraxsanahay in Apple ay ku dabaqdo talaabooyinkan inta badan dadka isticmaala dhibaatadan, shaki la'aan, waa xalka ugu fiican qof walba.
Kiiskeyga kaliya waxay i weydiisteen Visa si aan "u haysto" lacagta laakiin waxba lama bixin ilaa iyo inta laga helayo boosteejada bedelka, runti waxaan ku leeyahay qaansheegadka boostada welina waxba kama aysan qaadin.
Salaan iyo mahadsanid wadaagida khibradaada
Apple wuxuu sii daayaa shanaad tvOS 14 iyo watchOS 7 horumariye betas
Beta-kii shanaad ee iOS 14 / iPadOS loogu talagalay soo-saarayaasha hadda la heli karo